Microsoft yakaburitsa iyo Inowedzera Inochengeterwa Injini (JET Bhuruu) sosi kodhi | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft yakazarurwa ichangoburitswa iyo sosi kodhi yeyako inowedzerwa yekuchengetedza injini (aka JET Blue) uye inowanikwa paGitHub.
Mune zvinyorwa zvinoratidzwa nechishandiso, Microsoft inotsanangura iyo Inowedzera Injini Yekuchengetedza (IZVI) inyanzvi ISAM yekuchengetedza tekinoroji (yakanyorwa uye yakateerana nzira yekuwana). ESE inogonesa kunyorera kuchengeta uye kutora tafura data uchishandisa yakateedzana kana yakamisikidzwa mushambadzi kufamba.
Iyo inotsigira madhimoni akaverengerwa, kusanganisira matafura akapamhama ane akawanda makoramu mashoma, makoramu ane makwikwi mazhinji, uye mashoma, mareferenzi akapfuma, uye inogonesa kunyorera kunakidzwa neyakaenderana dhata mamiriro nekuvandudza uye kutora data rakagadziriswa. Maitiro ekudzoreredza njodzi anopiwa kuti achengetedze kusagadzikana kwedatha kunyangwe chiitiko chikatadza kushanda.
Inopa Atomic Inopindirana Isolated Kunogara Kwakasimba (ACID) pane iyo data uye schema uchishandisa yekunyora-pamberi rejista uye snapshot yekuzviparadzanisa modhi. Shanduko muESE dzakabatana chaizvo, izvo zvinoita kuti ESE ibatsire kune server server.
Uyezve, haina kureruka, izvo zvinoita kuti ive inobatsira kune maficha anoita mabasa ekubatsira.
Shanduko muESE dzakabatana chaizvo, izvo zvinoita kuti ESE ibatsire kune server server. Caches dhata yekuwedzera mukana weiyo yepamusoro-yekuita data. Uyezve, haina kureruka, izvo zvinoita kuti ive inobatsira kune maficha anoita mabasa ekubatsira.
ESE yakagadzirirwa kushandiswa mune zvinoshandiswa zvinoda kuchengetedzwa kwedata nekukurumidza uye / kana kureruka, uko kuwana kune mbishi mafaera kana iro registry risingatsigire indexing kana dhata saizi zvinodiwa zvechishandiso.
Iyo inoshandiswa nemaapplication asingambochengetedze anodarika 1 megabyte yedata, uye yakashandiswa mumashandisirwo ane dhatabhesi mune zvakanyanya zviitiko zveanopfuura 1 terabyte uye kazhinji inopfuura makumi mashanu egigabytes.
Iyo Inowedzerwa Injini Yekuchengetera chinhu cheWindows chakaunzwa muWindows 2000. Haasi ese mashandiro kana maAPI anowanikwa mune ese mavhezheni eWindows anoshanda masystem.
ESE inopa inoshandisa-mode yekuchengetedza injini iyo inogonesa data mukati memafirita emafaira emabhinari anowanikwa kuburikidza neWindows APIs. ESE inogona kuwanikwa kuburikidza neDLL iyo inotakurwa yakananga munzira yekunyorera; injini yedhatabhesi haidi kana kupa chero nzira yekuwana kure.
Kunyangwe ESE haina nzira iri kure kana yekuyambuka nzira yekuwana, mafaera e data aunoshandisa anogona kuendeswa kure uchishandisa Server Meseji Block (SMB) kuburikidza neWindows APIs, asi izvi hazvikurudzirwe.
Iyo Inowedzera Injini Yekuchengetedza (ESE) ndeye yakamisikidzwa indexed uye yakateedzana nzira yekuwana (ISAM) tekinoroji yekuchengetera uye yanga iri chikamu chakakosha cheWindows kweanopfuura chikamu chezana ramakore. Yakatanga kuoneka muWindows NT 3.51 uye Shanduro 4.0 isati yaenderera mberi nekuve nehupenyu hwakareba nhasi Windows 10.
Zvikamu, zvakadai seWindows Tsvaga kana zvishandiso zvakaita seKuchinjanisa, "chitoro nekutora tafura yedata uchishandisa indexed kana yakateedzana yekutsika kwekufambisa."
"Inowedzerwa Injini Yekuchengetedza (ESE) ndeimwe yeaya asingawanzo makodhi emakesi ane hupenyu hunopfuura makore makumi maviri nemashanu. Chekutanga chakaburitswa muWindows NT 25 uye munguva pfupi yapfuura muKuchinjana 3.51, yakanyorwa patsva muma4.0, uye yakagadziridzwa zvakanyanya mumakumi maviri emakore anotevera, inoramba iri musimboti weMicrosoft simba kusvika nhasi.
Inomhanya pamazana ezviuru zvemachina uye mamirioni edhisiki emaseva makuru ekuchengetedza tsamba eOfisi 365. Inomhanyisawo pasisitimu hombe dzeSMP pamwe neTB yekurangarira kune yakakura Active Directory deployments.
Nepo mafomu mazhinji anoshandisa asingapfuuri chiratidzo che1MB, "zviitiko zvakanyanya" zvinodarika 1TB
Kana zviri izvo zvakaiswa paGitHub, vashandisi vachanyadziswa kuti zvakataurwa zvakabviswa (kunyangwe copyright uye MIT rezinesi zviripo).
Chekupedzisira kana iwe uchifarira kuwana iyo sosi kodhi, unogona kuzviita kubva pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Microsoft yakaburitsa Inowedzera Inochengeterwa Injini sosi kodhi (JET Bhuruu)
Pirates yeFrontier Reach: mutambo wevhidhiyo ucha "kumhara" paLinux